कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ? - Rastrakokhabar
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार १८:४४
काठमाडौं, २१ वैशाख । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मंगलबार एकै दिन ५५ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २४ घण्टाको विवरणमा मृत्यु हुनेको संख्या ५५ उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै बाँकेमा १९२, झापामा १७४, कैलालीमा १४०, सुनसरी र सुर्खेतमा १२४/१२४ जना, काभ्रेपलाञ्चोकमा ११७, पर्सामा ११२, धनुषामा १०४ जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
Previous Post	सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको निर्णय
Next Post	आजको राशिफल (वि. सं. २०७८ बैशाख २२ गते, बुधबार)